UXiaomi ubonakalisa iprojektha yele laser engaphantsi kwe-1500 yeedola | Iindaba zeGajethi
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sikubonise iimpawu zeprojekthi entsha ye-laser ye UDell uPhambili 4k, i-100-intshi, 120 Hz kunye neprojektha ye-laser ye-4k ngexabiso lokuqala le- $ 5.999 apho kuye kwafuneka wongeze iirhafu ezihambelanayo zikarhulumente ngamnye. Namhlanje sithetha ngeprojektha entsha eboniswe nguXiaomi, iMi Laser Projector, iprojektha ebiza kakhulu, malunga ne-1500 yeedola e-China. Le projekthi isivumela ukuba sonwabele umxholo wethu owuthandayo kuqikelelo lwe-intshi ezili-150 kwaye sisebenzisa itekhnoloji efanayo njengoninzi lweethiyetha kwilizwe laseAsia.
Ukwenza iProjektha yeMi Laser ibe luThotho lwasekhaya emakhayeni ethu, kwinkampani Ifake isithethi esidityanisiweyo kwaye sisebenzisa ujongano olunye esinokubona kwiMi TV ibhokisi yokuseta ephezulu yokutya umxholo ngokusasaza kule nkampani inye kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo.
Izibonelelo zokusebenzisa itekhnoloji ye-laser yeeprojekthi, ayivumeli kuphela ukubonelela ngezigqibo eziphezulu, kodwa umgangatho uphucula ngendlela emangalisayo, Senza ngokupheleleyo ngaphandle kweebhalbhu zebane ezibizayo Ngaphandle kweeprojektha zemveli kwaye sigcina indawo eninzi, kuba olu hlobo lweeprojektha lubekwe ecaleni kodonga apho sifuna ukwenza khona ingqikelelo.
Okwangoku, inkampani khange inike ulwazi oluthe kratya kumgangatho ukuba esi sixhobo sinokusinika ntoni, njengesisombululo esisesona siphezulu esisincedayo, Hz ... ke kuyakufuneka silinde kude kube ngu-Julayi 4, umhla apho inkampani ivula ixesha lokubhukisha le projektha.
Iprojekti yam yeLaser isebenzisa i-ALPD 3.0, itekhnoloji yokukhanya ye-laser eyenziwe yi-Appotronics, inkampani ngasemva iipesenti ezingama-90 zemidlalo yeqonga ezikhoyo eTshayina. Kodwa kubonakala ngathi iiprojekthi zeXiaomi zexesha elizayo azipheli ngentsebenziswano yale nkampani, kuba kwizixhobo ezizayo ziya kusebenzisa itekhnoloji ye-DLP evela kwiiTexas Instruments
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » IXiaomi iveza iprojektha yele laser engaphantsi kweedola ezili-1500